Ikhaya / Umatshini wokutywina / Umatshini wokutywina weAluminiyam oFudumeleyo
Udidi: Umatshini wokutywina tags: I-aluminium inokutywina okutywinayo, i-aluminium foil induction sealer, Ukutywinwa kwe-aluminium foil, Aluminium ngefoyile ye sealer, Umatshini wokufaka uphawu lwealuminium, thenga uphawu lokungeniswa, umatshini wokutywina, umatshini wokutywina, Umatshini wokutywina we-electromagnetic induction, Ukunyanzelwa kokutywina, ngefoyile ye uphawu umatshini, ukutywina ubushushu, induction cap ukutywina, Umatshini wokutywina itywina, ukutywina, Ixabiso lokutywina, ukutywina uphawu, Umatshini wokutywina, umatshini wokutywina
Yintoni i- "Induction aluminium foil umatshini wokutywina"?
Induction Umatshini wokutywina weAluminiyam Isetyenziselwa i-PP, i-PE, i-PET, i-PS, i-ABS, i-HDPE, i-LDPE kunye neebhotile zeglasi, ezisebenzisa umgaqo we-electromagnetic ukuvelisa ubushushu obuphezulu ukunyibilikisa ifoyile ye-aluminium ethi ibambelele ekuvulekeni kweebhotile, ifikelele kwinjongo yobungqina obumanzi , ubungqina bokuvuza, ubungqina bokungunda kunye nokwandisa ixesha lolondolozo.
Uhlobo oluqhelekileyo lwetywina langaphakathi sisiqwenga se-2 sangaphakathi esishiya itywina lesibini ngaphakathi kweekepusi emva kokuba itywina lokungeniswa lisusiwe. Oku kuhlala kusetyenziswa apho imiba yokuvuza iyinto exhalabisayo. Enye inketho sisiqwenga esinye sangaphakathi esitywiniweyo xa itywina lokungenisa lisusiwe kungekho liner ishiyekileyo ekuvaleni. Unokukhetha kwakhona kumatywina ane-pulltab okanye lawo anetywina elixobukayo elingashiyi ntsalela kwibhotile. Kuya kufuneka uqiniseke ukuba i-liner iyahambelana nezinto zebhotile.
Speed ​​ukutywina Iibhotile ezingama-20-300 / min
Ukutywina ubude 20-280mm 20-180mm
igalelo Voltage Isigaba esinye, 220V, 50 / 60Hz
Izinto ezifanelekileyo I-PP, i-PE, i-PET, i-PS, i-ABS, i-HDPE, i-LDPE kunye neebhotile zeglasi, ibhotile yeplastiki yomlomo wealuminium ifilimu
Ubungakanani (L * W * H): 1005 * 440 * 390mm 970 * 515 * 475mm
ubunzima 72kg 51kg 38kg